तौल कसरी घटाउने ?
बुधबार, असोज १४, २०७७ ११:११:१० युनिकोड पुरानो वेबसाइट
बामदेवको कारण रोकियो मन्त्रिमण्डल पूनर्गठन
ललितपुर महानगरपालिकासति दुईवटै नगरपालिकाका मेयरलाई कोरोना पोजेटिभ
बिहिबार, भदौ १८, २०७७ खोजतलास
अहिले कोभिड— १९ को महामारी भन्ने हल्लाले गर्दा जुन लकडाउन भईरहेको छ त्यस लकडाउनले अधिकांश मानिसहरुमा तौल बढेको र पेट अत्याधिक ठूलो हुने समस्या भइरहेकोले तौल कसरी घटाउने विषयमा नै केन्द्रित भएको छु ।
तौल बढी भएको नभएको कसरी थाहा पाउने ?
– मानिसको उचाईलाई सेन्टिमिटरमा नापेर त्यसबाट १०० घटाउँदा जति बाँकी रहन्छ त्यसलाई सामान्य तौल मान्ने मापदण्ड बहुप्रचलित छ । यस अनुसार १५५ सेमी उचाई भएको मानिसको सामान्य तौल १५५–१०० बराबर ५५ केजी हुन्छ तर व्यवहारमा अक्सर यसलाई सहीतौल भन्न नमिल्ने हुन्छ किनभने यसतौलमा रहने मानिसको छाती र कम्मरको अनुपात मिलेको देखिँदैन ।
– बिएमआईको सुत्र अनुसार उचाईलाई मिटरमा नापी आउने अंकको वर्गफलले तौल केजीलाई भाग गर्दा १८.५ देखि २४.९ सम्म आएमा त्यसलाई सामान्य तौल मान्ने गरिन्छ तर २५ बिएमआईमा बस्दा पनि छाती र पेटको नाप नमिल्ने हुनाले (१८.५– २२ ) सम्म मापदण्ड भित्र परेमा त्यसलाई उसको सामान्य तौल मानिन्छ ।
– प्रकृति प्रेमी समूह निरोगधामले तोकेको मापदण्ड यदि ५ फिटको मानिसको अधिकतम तौल ५० केजी र न्युनतम ४० केजी भएसम्म ठीक तौल हो । ४० भन्दा घटी हुँदा कम तौल र ५० भन्दा बढी भएमा बढी तौल भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले एवंरितले ५ फिट १ ईन्चमा साढे दुई केजी बढाउने र घटिमा साढे दुई केजी केजी घटाएर बुझ्ने ।
त्यस्तै छाती (काखी मुनी) र कम्मर (नाईटो भन्दा माथि) को सहिनाप ४ः३ को रेशियोमा हुनुपर्छ अर्थात् छातीको नाप ३६ ईन्च भए कम्मरको नाप २७ ईन्च हुँदा अनुपात मिलेको भन्ने गरिन्छ । नभए छाती ४ कम्मर पनि ४ हुदासम्म रोगलाग्ने सम्भावना हुदैन तर छाती भन्दा कम्मर (पेट) ठूलो हँुदै गएपछि अनुपात नमिलेको र रोगको आधार तयार हँुदैछ भनेर बुझ्नु पर्छ ।
तौल बढी हुने कारणहरु–
– खाना चाहिने भन्दा बढी खानु ।
– चिल्लोमा तारेभुटेका खाना र मरमसलाको अत्याधिक प्रयोग गर्नु ।
– शारीरिक श्रम, व्यायामको अभाव हुनु ।
– मैदा जस्ता मिहिन चिज, जंकफुडको अत्यधिक सेबन गर्नु हरिया सागपात, फलफुलको सेवन कम गर्नु ।
मोटोपनको मुख्य कारण अपच नै हो । जब तौल बढी हुन्छ अपच भएकै हुन्छ । अपचको अर्थ दिनभरी मल निष्कासन नहुनु पनि हो भने धेरैपटक मल निष्कासन भइरहनु पनि हो । त्यसैले पचेको भनेर बुझ्न बिहान उठ्ने बित्तिकै खाएको २४ घण्टा भित्र गन्ध नआउने बाधिएको च्यापच्याप नलाग्ने गरी २–३ मिनेटभित्र मल निष्कासन भएमा मात्र कब्जीयत छैन भनेर बुझ्नु पर्छ । त्यसैले कब्जीयत भइरहेसम्म मोटोपन हुन्छ र मोटोपन पनि एक प्रकारको जीर्ण दीघ रोगमा पर्दछ । मोटोपनबाट नै अन्य रोगहरु सुगर, पे्रसर, बाथ, दम, मुुटुरोग जस्ता जीर्ण दीर्घ रोगहरु लाग्ने संभाबना बढि हुन्छ । बास्तबमा मोटोपन नै सबै रोगको घर हो ।
मोटोपन घटाउन दैनिक आहार कस्तो लिने ?
– यदि खाना करिब ९–१० भित्र नै लिइन्छ भने एकदलिय अन्न (कार्बोहाइट्रेड) जति लिइन्छ त्यसमा २५% कम गर्ने, हरियो तरकारी करिब २००–३०० गा्रम र सलाद करिब १००–१५० ग्राम लिने
– ९–१० भित्र खाना लिइयो भने खाजामा २–३ भित्र सिजनल फलफुल अथवा ताजा तरकारीको सुप अथवा हल्का आहार गर्ने ।
– बेलुकी ७–८ बजे भित्र बिहान जस्तै खाना लिने ।
– यदि दिउँसो टन्न खाजा लिइएको छ भने बेलुकी फलफुल मात्र ताजा तरकारीको सुप लिने ।
मोटोपन भएका मानिसले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
– भोजनमा चिल्लो तारेभुटेका कुराहरु नखाने ।
– तेल, चिनी, सख्खर, मह, मख्खनको प्रयोग नगर्ने या ज्यादै कम मात्र लिने ।
– छिटो तौल घटाउनु छ भने हप्तामा १ दिन फलाहार वा उपवासमा जान सकिन्छ । यदि कुनैपनि जीर्ण दीर्घ रोग जस्तै सुगर, प्रेसर, दम जस्ता समस्याको औषधी प्रयोग गरिरहेको छ भने उपवासमा जानु हुँदैन ।
– बिहान उठ्ने बित्तिकै १ लिटर मनतातो पानी लिने ।
– खाना र खाजासँग पानी नलिने खानाको १ घण्टा अघिपछि घण्टामा १ गिलासको दरले लिने ।
– जाडोमा दुईदेखि साढेदुई लिटर, गर्मीमा तिनदेखि साढे तिन लिटर पानी लिनु उत्तम हुन्छ ।
– माछा, मासु, अण्डा दुग्ध पदार्थ र मैदाजन्य आहारको प्रयोग नगर्दा तौल छिटो घट्छ किनभने यी चिज लिने बित्तिकै कब्जीयत कायम नै रहन्छ । शाकाहारी उचित आहार लिनु नै तौल घटाउने राम्रो उपाय हो ।
– प्रोटिनको लागि दाल, गेडागुडी, अंकुरित अन्न, ड्राई नट्सहरु पनि हल्का लिन सकिन्छ । तर तौल बढी छ भने दाल गेडागुडी, अन्नको १० प्रतिशत मात्र लिए पुग्छ । तर ड्र्राई नट्स लिनैपर्ने होइन ।
– धेरै चोटी कुचुकुचु खाँदा अपच हुन्छ । त्यसैले एक ठोस आहारको ४–५ घण्टापछि मात्र अर्को ठोस आहार लिनुपर्छ । बिचमा पानी बाहेक अन्य केही खानु हँुदैन ।
मोटोपनमा कस्तो व्यायाम गर्ने ?
– तौल अधिक मानिसहरुले धेरै उफ्रीपाफ्री गर्ने व्यायाम, जम्प गर्नु पर्ने जस्तै डोरी खेल्ने जस्ता व्यायाम नगर्नुपर्छ ।
– अत्याधिक मोटोपन छ भने हल्काहल्का सजिलो शरीरको जोनीहरु संचालन हुने सुक्ष्म अंगव्यायाम, प्राणायाम, ध्यान लाभदायक हुन्छन् । यदि व्यायाम गर्ने अवस्था छैन भने मर्निङवाक गर्नु उत्तम हुन्छ ।
– मोटोपनका मानिसहरु दिउँसो सुत्ने बानी गर्नुहँुदैन । यदि राती निन्द्रा नपुगेको अवस्थामा मात्र दिउँसो सुत्ने गर्नुपर्छ ।
– खाना खाँदा बिस्तारै चपाएर खानुपर्छ खाना साह्रै छिटो खाने, चपाएर नखादा, खानासँग पानी लिने गर्दा पनि अपच भएर तौल बढ्न जान्छ ।
विचार कस्तो गर्ने ?
– धेरै खाएर लाभ हँुदैन । शरीर स्वस्थ रहन थोरै र उचित आहार लिए पुग्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ ।
– हामी खानाको लागि बाँच्ने होइन, बाच्नको लागि खाने हो त्यसैले प्राकृतिक भोजन, प्रकृतिले दिएको शाकाहारी आहार नै आफ्नो आहार हो भन्ने कुरा बोध गर्नुपर्दछ ।
मानिसहरु मोटोपन घटाउन अनेकौं उपाय गर्छन् जस्तै पेटी बाँधेर, डायटिङ्ग गरेर ,बिभिन्न जडिबुटी, स्लीम चिया, कागती पानी खाएर, प्रोटीन बढी खाएर मोटोपन घटाउने प्रयास गर्छन् तर ती सबै अप्राकृतिक र अनुचित हुन् । सहि तरीकाले तौल घटाउन प्रकृति प्रेमी समुह निरोगधामले ३ बराबर आहार (एक भाग अन्न, एकभाग हरियो तरकारी र एक भाग काँचो सलाद फलफुल), ४ बराबर आहार (एक भाग अन्न, दुई भाग हरियो तरकारी र एकभाग काँचो सलाद फलफुल) को प्रस्तुत गरेको छ । प्रकृति प्रेमी समुहले संचालन गरेको दिशा बदले दशा सप्रिन्छ भन्ने आवाशिय शिविरमा भरपेट खाएरै ७ दिनमा ७ किलोसम्म तौल घटेको रेकर्ड छ ।
यी नियमहरु पालना गर्दा आहार मिलाएरै, कुनै व्यायाम नगरीकन, भरपेट खाएर नै घरैमा बसीबसी पनि हप्ताको १–२ केजी तौल सजिलैसँग घटाउन सकिन्छ । तौल घट्ने प्रक्रियामा शरीरको पेट पनि बिस्तारै घट्न थाल्छ । आहारको मामिलामा के खाँने, कति मात्रा खाने, कतिपटक खाने, के–के मिसाएर खाने, कसरी खाने भन्ने कुरामा अलमल भईरहनु पर्दैन । विवेक ज्ञानको प्रयोग गर्दै आफ्नै शरीरलाई मापदण्द बनाउँदै खादा सबै कुरा शरीरले नै बताउँन थाल्छ । विवेकज्ञानको प्रयोग गर्दै उचित आहार विहार र विचारको प्रयोग गर्दा बढेको तौल मात्र होईन, सबै खाले तीब्र रोग र जीर्णदीर्ध रोगबाट सजिलै मुक्त हुन सकिन्छ र सदा निरोगी र आनन्दमय जीवन जीउँन सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भदौ १८, २०७७, ०६:२७:००
कोरोनाबाट थप १० जनाको निधन १८ घण्टा पहिले